Nhoroondo yerufu rwakaziviswa rwaGabriel García Márquez | Zvazvino Zvinyorwa
Alberto Makumbo | | Mabhuku, Literature, Novela
Kana paine munyori wepasirese wechiLatin America, ndiye Gabriel García Márquez. Mubairo weColombia weNobel hauna kungogadzira zvemashiripiti izvo zvaizoshandura zvachose mabhuku, asi zvakare zvakaisa parutivi nguva yakakwana yekuti vatipe mamwe emabasa akaratidzirwa nehungwaru hwehunyanzvi hwemunyori weRimwe Makore Mazana ega.
Muenzaniso wakanakisa ndewekuti Chronicle Yerufu Rwakafanotaurwa, iro rakaburitswa muna 1981, nekukasira rikave rimwe remabasa eGabo.
1 Zvinyorwa zveChronicle of a Death Zvakafanotaurwa
2 Chronicle Yerufu Rwakafanotaurwa Vanhu
2.1 Vamwe vatambi
3 Chronicle yerufu rwakaziviswa: anonyanya kutapa nhau Gabo
Zvinyorwa zveChronicle of a Death Zvakafanotaurwa
Yakagadzwa mutaundi riri mumahombekombe muCaribbean, Chronicle yeRufu Yakafanotaurwa inotanga nemuchato pakati paBayardo San Román, mamioneya wemuno, naÁngela Vicario. Nekudaro, pakusvika kumba mushure memhemberero, Bayardo anoona kuti mukadzi wake mutsva haasi mhandara, saka anosarudza kumudzosera kumba kwemhuri. Mushure mekugamuchira kurohwa kubva kuna amai vake, Angela anopomera Santiago Nasar, muvakidzani ane mavambo echiArabhu, kuve chikonzero chenhamo yake.
Kubva ipapo, Vanun'una vaAngela, Pedro naPablo, vazivisa pamberi pevanhu vese kuti ndivo vachange vachitungamira kuuraya Santiago, kunyangwe asingazive nhau kusvika masekondi asati afa, paanobayiwa nehama mbiri pamusuwo wemba yake uye pamberi pechaunga achiziva nezvenhau iyo inotanga kumhanya ichitevera mepu yemamiriro ezvinhu uye mavara munyori anovakwazve mumapeji ebasa, kubvira Kana munhu wese aiziva kuti Santiago achauraiwa, sei pasina munhu akataura chinhu?
Chronicle Yerufu Rwakafanotaurwa Vanhu
Ichokwadi chekusvika nyaya iyo, neimwe nzira, inoita kuti vese vagari vako vabatanidzwe vanofungidzira kuvepo kwe vatambi vakawanda. Dzakanyanya zvekuti pane chero mepu yakanaka yekutsvaga nekurangarira hukama hwenzvimbo yega yega maringe neHama Vicario naSantiago Nasar, ukuwo vachibata vese vatambi veguta rese. chapupu chinoziva chisina kutya nenhau.
Izvi ndizvo vanonyanya kutaurwa muChronicle yeRufu Rwakafanotaurwa:
Santiago Nazar: Jaya rine makore makumi maviri nerimwe ekuberekerwa muArabhu, Santiago ndiye hunhu hunotaurwa neuyu "akazivisa rufu." Anotarisira chirango chababa vachangobva kufa, Santiago jaya rine hupenyu uye rinofara, rinoda mabhiza, ayo hama dzeVicario dzinovimbisa kuuraya.
Angela Vicario: Mudiki pane vese wemhuri yeVicario ndeyekuumba uye kusatenda mukadzi wechidiki uyo kurambwa kwake mushure mekurasikirwa nehumhandara kwakawanikwa kunomutungamira kupomera Santiago nezve zvakaitika. Kunyangwe mukati mebhuku rose chikonzero uye nguva yakatungamira kusangana kwakadai isingazivikanwe, zvinozivikanwa kuti Angela akakundwa senzira yekudzivirira mumwe munhu waaida.
Bayardo San Roman: Mugadziri wehupfumi hwakawanda nekuda kwechinzvimbo chake sainjiniya wechitima, Bayardo murume ane makore makumi matatu ane tsika, murume akasvinura anofarirwa nemunhu wese mudhorobha. Anoda bato, Bayardo ane hunhu uye ane moyo wakanaka hunhu anotora chakavanzika chemukadzi wake mutsva sekutengesa.
Victoria Guzman: Cook yemhuri yeSantiago Nasar.
Ibrahim Nassar: Baba vaSantiago Nasar, aigara achitaura muchiArabic nemwanakomana wake uye aidanana naVictoria Guzmán, waaishungurudza.
Ruva raMwari: Mwanasikana waVictoria Guzmán uye ramangwana anoda Santiago Nasar.
Bhishopi: Anosvika mutaundi musi iwoyo panofa Santiago.
Placida Linero: Amai veSantiago, avo vanourawa pamusuwo wemba yavo mushure mekufunga kuti vachiri mukati mayo.
Pedro naPablo Vicario: Mapatya hama dzaAngela. Vane makore makumi maviri nemana uye vane chinangwa chekuuraya Santiago.
Mutauri wenyaya: Munhu akakosha seyekupokana nemunyori, murondedzeri anga asipo panguva dzezviitiko, nekuti akataura kuti aive mumaoko amai vake, María Alejandrina Cervantes, ari makore akazotevera apo aizovaka zvekare zviitiko zvekuurawa Santiago Nasar.
Chronicle yerufu rwakaziviswa: anonyanya kutapa nhau Gabo
Manaure, iro ramambo guta uko chiitiko icho chakafuridzira Chronicle yeRufu Rwakagara Rwaitika.
Gabriel García Márquez aive munyori mukuru asi, pamusoro pezvose, mutori wenhau akasarudzika. Anopa kune mapepanhau akasiyana muColombia, munyori akayambuka mutsetse wakanaka pakati pezvenhau uye ngano pane akati wandei, pakati pavo aine Nyaya yake inozivikanwa yeMurume Akapunzika Chikepe kana, kunyanya, neChronicle yeRufu Rwakafanotaurwa.
Kubva pane chiitiko chakaitika muna Ndira 20, 1951 mutaundi regungwa reManaure, mubazi reColombia reSucre, Gabo yakavakwazve kupondwa kwaCayetano Wemamwe Marudzi, akapomerwa mhosva yekubata chibharo Margarita Chicha Salas, uyo aizove Angela Vicario wenyaya iyi. Margarita angadai akarambwa naMiguel Reyes Palencia, inoverengeka Bayardo San Román, akaburitsa muna 2007 bhuku raLa Verdad: Makore makumi mashanu gare gare, achivakazve zvaakaratidzwa zvechiitiko chaizokwezva Gabo kutozosvikira rave iro bhuku raizoburitswa. muna 50.
Inotungamirwa nekuvakazve chokwadi chine magumo asingazivikanwe (Santiago Nasar akanyadzisa Angela zvechokwadi here?), Munyori anopatsanura bhuku iri muzvikamu zvishanu, imwe neimwe ichitarisa pane imwe nguva panguva yekuponda uye nezvevanyori vanobatanidzwa. Domain yeruzivo ine chinangwa kutsanangura sei kupondwa kwaSantiago kwakaitika dai guta rese raiziva kuti zvaizoitika asi hapana akaedza kuzvidzivirira.
Nekudaro, zvisinei nehunhu hwayo hwechinyorwa, bhuku iri rinochengeterawo akasiyana nguva dzedosi ye mashiripiti echokwadi hunhu hwaGabo. Kubata uko kunogona kukosheswa zvese mukunhuwirira kwerufu kunosiiwa naSantiago kuhama dzeVicario uye neruvara rwebhuruu remweya waYolanda de Xius, muvakidzani anoedza chero zvodii kudzoreredza imba yake kubva mhiri, kana kuvapo iyo "shiri inoyerera" iyo, semweya, inobhururuka pamusoro pekereke yemusha manheru ega ega.
Iyo inoverengeka iyo yatove chikamu chenhoroondo yenguva ino rondedzero uye iyo, nekufamba kwenguva, yakaguma yava imwe ye iwo akakosha mabhuku aGabriel García Márquez.
Wakaverenga here Chronicle Yerufu Rwakafanotaurwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Nhoroondo yerufu rwakaziviswa rwaGabriel García Márquez